China Fanamboarana masinina mandeha ho azy sy orinasa | tampon
TP-TGXG-200 Machine tavoahangy tavoahangy mandeha ho azy dia ampiasaina hanaparitahana satroka tavoahangy ho azy. Izy io dia ampiharina betsaka amin'ny sakafo, fanafody, indostria simika sns. Tsy misy fetrany ny endrika, ny fitaovana, ny haben'ny tavoahangy mahazatra ary ny satroka visy. Ny karazana capping mitohy dia mahatonga an'i TP-TGXG-200 hifanaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny tsipika fanangonana. Ity masinina ity dia tena manana tanjona maro, izay ampiharina amin'ny fomba malalaka sy mora miasa. Raha ampitahaina amin'ny karazan'asa miasa mahazatra, TP-TGXG-200 dia mahomby kokoa, manindry kokoa ary miteraka tsy fahavoazana amin'ny kapa.
Ny milina fanidiana mandeha ho azy dia azo ampiasaina amin'ny tavoahangy misy satroka visy amin'ny habe, endrika ary fitaovana hafa.
A. Haben'ny tavoahangy
Mety amin'ny tavoahangy misy savaivony 20-120mm sy hahavony 60-180mm. Saingy azo amboarina amin'ny haben'ny tavoahangy mety koa ankoatr'io sokajy io ihany koa.
B. endrika tavoahangy
Ny milina fanidiana mandeha ho azy dia azo ampiharina amin'ny endrika maro toy ny boribory boribory na endrika sarotra.
C. Fitaovana tavoahangy sy satroka
Na inona na inona plastika vita amin'ny vera na vy, ilay milina fanefena mandeha ho azy dia mahazaka azy rehetra.
D. Karazana satroka sikotra
Ny masinina fanidiana mandeha ho azy dia afaka manaparitaka karazan-tady rehetra, toy ny paompy, famafazana, kapoaka mitete sns.
Ny milina fanidiana mandeha ho azy dia afaka miditra amin'ny karazana indostria rehetra na inona na inona ny vovoka, ranoka, tsipika famonosana granule, na ny sakafo, fanafody, simia na indostria hafa. Na aiza na aiza misy takelaka borosy, dia misy milina fanefitra mandeha ho azy hiara-miasa.
Fananganana sy fiasa
Izy io dia misy milina fanakanana sy feeder cap.
1. feeder cap
2. Fametahana kapa
3. Mpisaraka tavoahangy
4. kodiarana manaparitaka
5. Fehikibo fehikibo tavoahangy
6. Fehikibo fampitana tavoahangy
Miasa ny fanarahana
■ Ampiasaina be amin'ny tavoahangy sy satroka amin'ny endrika sy fitaovana isan-karazany.
■ PLC & fanaraha-maso ny efijery, mora ampiasaina.
■ Fandidiana mora sy fanitsiana mora, mitahiry loharanon'olombelona maro kokoa ary koa ny vidin'ny fotoana.
■ Haingam-pandeha avo sy azo ovaina, izay mety amin'ny karazana tsipika fanangonana rehetra.
■ Fampisehoana marin-toerana sy avo lenta.
■ Ny bokotra fanombohana bokotra iray dia mitondra fahafaha-manao betsaka.
■ Ny famolavolana amin'ny antsipiriany dia mahatonga ny masinina ho lasa olona sy manan-tsaina kokoa.
■ Famaritana tsara momba ny fomba fijerin'ny masinina, endrika ambony sy endrika ivelany.
■ Ny vatan'ny masinina dia vita amin'ny SUS 304, mifanaraka amin'ny fenitra GMP.
■ Ireo faritra mifandray rehetra misy tavoahangy sy sarony dia vita amin'ny fiarovana ara-materialy ho an'ny sakafo.
■ Fanehoana dizitaly mba hampisehoana ny haben'ny tavoahangy samihafa, izay mety amin'ny fanovana tavoahangy (Safidy).
■ Sensor optronic hanala ireo tavoahangy izay tsy voafehy (Safidy).
■ Fitaovana nakarina mba hanome sakafo amin'ny sarony ho azy.
■ Ny tapany mianjera dia afaka manala ny tadin'ny lesoka (amin'ny fitsofana ny rivotra sy ny refesina amin'ny lanja).
■ Ny fehikibo hanindry ny sarony dia mirona, ka afaka manitsy ny sarony amin'ny toerana mety izy ary avy eo manindry.
Ampiasao ny fitsipiky ny fifandanjana afovoany samy hafa amin'ny sisiny roa amin'ny satrony, ny satrony arofanina mahitsy ihany no azo afindra mankany an-tampony. Hianjera ho azy ny satroka amin'ny lalana tsy mety.
Rehefa avy nitondra ny satrony eo amboniny ny mpanera, dia mitsoka ny satrony amin'ny lalan'ny satroka ilay mpitsoka.
Ny sensor sensor amin'ny lesoka dia afaka mamantatra mora foana ny takalony mivadika. Ny remover automatique cap remover sy ny tavoahangy sensor, mahatratra ny effets capping tsara
Ny mpampisaraka tavoahangy dia hampisaraka ny tavoahangy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny tavoahangy amin'ny toerany. Ny tavoahangy boribory mazàna dia mila mpampisaraka iray, ary ny tavoahangy tavoahangy dia mila mpampisaraka roa mifanohitra.
Ny tsy fahampian'ny cap detecting fitaovana dia mifehy ny feeder cap ary mihazona mandeha ho azy. Misy sensor roa amin'ny lafiny roa amin'ny lalan'ny cap, ny iray hijerena raha feno kapila ilay lalana, ny iray hijerena raha foana ny làlana.
Ny hafainganam-pandeha farany amin'ny mpampita tavoahangy sy ny feeder cap dia mety mahatratra 100 bpm, izay mitondra haingam-pandeha avo lenta mifanaraka amin'ny tsipika fanangonana isan-karazany.
Kodiarana telo tsiroaroa no mihodina haingana. Ny tsirairay amin'ireo mpivady dia manana ny asany manokana. Ny mpivady voalohany dia afaka mihodina mihodina mba hahatonga ny satroka fametrahana sarotra ho eo amin'ny toerany marina. Saingy azon'izy ireo atao ny mamadika ny satroka mba hahatratra toerana mety tsara miaraka amin'ireo kodiarana tsiroaroa raha toa ka ara-dalàna ny satrony. Ny tsiroaroa fahatelo dia manamboatra kely mba hanamafisana ny satrony, noho izany ny hafainganam-pandehanany dia miadana indrindra eo amin'ny kodiarana rehetra.
Raha ampitahaina amin'ny fanitsiana kodiarana tanana avy amin'ireo mpamatsy hafa dia mety kokoa ny bokotra iray hampiakarana na hampidinana ilay fitaovana fanamoriana rehetra.
Fiovana efatra avy eo ankavia miankavanana no ampiasaina hanitsiana ny hafainganam-pandehan'ny mpampita tavoahangy, ny fametahana tavoahangy, ny fiakarana satroka ary ny fisarahana amin'ny tavoahangy. Ny dial dia afaka mitarika ny mpandraharaha hahatratra ny hafainganam-pandeha mety ho an'ny fonosana isan-karazany mora foana.
Kodiarana tanana hanovana ny elanelana misy eo amin'ny fehin-kibo fantsona roa mora foana. Misy kodiarana roa amin'ny faran'ny fehikibo fehikibo. Ny dial dia mitarika mpandraharaha handeha amin'ny toerana marina tsara rehefa manova ny haben'ny tavoahangy.
Fanovana hanitsiana ny elanelana misy eo anelanelan'ny kodiarana sy ny satrony. Arakaraky ny halaviran'ny halaviran'ny dia ho henjana kokoa ny satrony. Manampy ny mpandraharaha ny Dial hitady lavitra mety indrindra.
PLC & fanaraha-maso ny efijery amin'ny programa fandidiana tsotra, manamora ny asa sy mandaitra kokoa.
Bokotra vonjy taitra hanakanana ny milina indray mandeha amin'ny fotoana maika, izay mitazona ny fiarovana ny mpandraharaha.
Masinina fonosana tavoahangy TP-TGXG-200
Tavoahangy 50-120 / min
Φ22-120mm (namboarina mifanaraka amin'ny takiana)
Ny haavon'ny tavoahangy
60-280mm (namboarina mifanaraka amin'ny takiana)
220V / 50-60Hz (na namboarina)
Ny milina fanidiana mandeha ho azy dia afaka miasa miaraka amin'ny milina famenoana sy ny milina fanoratana mba hamoronana tsipika fanangonana.
A. Mpanamboatra tavoahangy + famenoana auger + milina fanidiana mandeha ho azy + milina famehezana foil.
B. Famolavolana tavoahangy + mpamono auger + milina fanidiana mandeha ho azy + milina famehezana foil + milina fanoratana
Shippment & fonosana
ACCESSORIES ao anaty boaty
■ Boky torolàlana
■ Kisary elektrika sy sary mifandray
■ Torolàlana momba ny fiarovana
■ Andiana akanjo anaovana
■ Fitaovana fikojakojana
■ Lisitry ny fandrindrana (fiaviana, maodely, sombiny, vidiny)
Fanitsiana ny milina fanidiana mandeha ho azy
1. Fametrahana ny rafitra Cap Elevator sy cap.
(1) Fametrahana ny sensor sy ny detection cap.
Ny elevator cap sy ny fametrahana ny rafitra dia misaraka alohan'ny fandefasana azy, azafady apetraka ny rafitra fandrindrana sy fametrahana ny cap amin'ny masinina fanidiana alohan'ny hampandehanana ilay masinina. Ampifandraiso azafady ny rafitr'asa aseho amin'ireto sary manaraka ireto:
Sensor tsy fisavana cap cap (fijanonana milina)
a. Ampifandraiso ny satroka mametraka ny làlana ary mihazakazaka amin'ny visy.
b. Ampifandraiso amin'ny tariby havanana amin'ny takelaka fanaraha-maso ny tariby môtô.
d. Ampifandraiso amin'ny sensor amplifier 1 ny sensor sensor feno.
d. Ampifandraiso amin'ny sensor amplifier 2 ny sensor cap cap.
Amboary ny zoro ny rojo fiakarana satroka: ny zoro ny rojo fiakarana satroka dia namboarina araka ny satrok'ilay santionany omenao alohan'ny fandefasana. Raha ilaina ny manova ny famaritana ny satrony (manova fotsiny ny habeny, tsy miova ny karazan'ilay satroka), azafady mba ampifanaraho amin'ny alàlan'ny zoro manamboatra rojo ny zoro amin'ny alàlan'ny zoro fanitsiana zoro mandra-pahatongan'ny rojo mampita satroka izay mirona amin'ny rojo misy sisiny ambony . Filazana toy izao manaraka izao:
Ny satroka ao amin'ny fanjakana A dia lalana marina raha ny rojo mitaingina ny satroka mitaingina satroka.
Ny satroka ao amin'ny fanjakana B dia hidina ao anaty fitoeran-drano raha toa ka zoro tsara ny rojo.
(2) Amboary ny rafitra milatsaka cap (chute)
Ny zoro ny mampidina chute sy ny habaka dia efa napetraka araka ny santionany nomena. Raha ara-dalàna raha tsy misy famaritana vaovao momba ny tavoahangy na satroka dia tsy mila ahitsy ny toerana. Ary raha misy famaritana bebe kokoa noho ny famaritana tavoahangy na satroka 1, ny mpanjifa dia mila mitanisa ilay entana amin'ny fifanarahana na ny miraikitra aminy mba hahazoana antoka fa hamela toerana malalaka ho an'ny fanovana fanampiny ny mpamokatra. Ireto ny fomba fanitsiana:
Amboary ny haavon'ny rafi-pitetezana cap: Azafady alefa ny visy mitaingina alohan'ny hamadihana ny kodiarana 1.
Ny visy fanitsiana dia afaka manitsy ny haavon'ny haben'ny chute.
Ny kodiarana famahana 2 (amin'ny lafiny roa) dia afaka manitsy ny sakan'ny haben'ny chute.
(3) Manitsy ny ampahany manindry ny satrony
Ny satrony dia hanarona ny vavan'ny tavoahangy avy ao amin'ny chute rehefa mandeha ny tavoahangy mankamin'ny faritry ny satrony manery. Ny ampahany manindry ny satrony dia azo ahitsy ihany koa noho ny halavan'ny tavoahangy sy satroka. Hisy fiatraikany amin'ny fampisehoana kapoka raha tsy mety ny tsindry amin'ny satrony. Raha avo loatra ny toeran'ny sombin-gazety cap, dia hisy fiantraikany amin'ny fampisehoana manindry. Ary raha ambany loatra ny toerana dia ho simba ny satroka na tavoahangy. Mazava ho azy ny haavon'ny ampahany manindry ny satrony dia namboarina alohan'ny fandefasana. Raha mila manitsy ny haavony ny mpampiasa, dia toy izao manaraka izao ny fomba fanovana:
Azafady azafady ny visy mitaingina alohan'ny hanamboarana ny haavon'ny tapany fanindriana.
Misy tapany manindry tapany hafa amin'ilay milina hifanaraka amin'ny tavoahangy kely indrindra, ny fomba fanovana dia aseho amin'ny horonantsary.
(4). Manitsy ny tsindry rivotra hitsoka ny satrony ao anaty chute.
2. Manitsy ny haavon'ny ampahany lehibe amin'ny ankapobeny.
Ny haavon'ny ampahany lehibe toy ny firafitry ny tavoahangy vita amin'ny tavoahangy, kodiarana mihodina amin'ny gum-elastika, ny ampahany manindry ny satrony dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanamafisam-peo ataon'ny masinina. Ny bokotra fanaraha-maso ny ascenseur masinina dia eo amin'ny sisiny ankavanan'ny tontonana fanaraha-maso. Ny mpampiasa dia tokony hamaha ny visy fametahana eo amin'ny andry roa alohan'ny hanombohana ny ascenseur ny milina.
Midika hoe midina ny ø ary midika hoe miakatra ny ø. Mba hahazoana antoka fa ny toeran'ny kodiarana mihodinkodina dia mifanaraka amin'ny satrony. Akatony azafady ny herin'ny ascenseur ary afatory ny visy miakatra aorian'ny fanitsiana.
Fanamarihana: Tsindrio azafady ny switch switch (maitso) hatrany mandra-pahatonganao ny toerana mety. Miadana be ny hafainganam-pandehan'ny ascenseur, azafady mba miandry am-paharetana.
3. Amboary ny kodiarana mihodina amin'ny siligaoma (kodiarana telo vita amin'ny tsiroaroa)
Ny haavon'ny kodiarana mihodinkodina dia ahitsy amin'ny vatan'ny masinina.
Ny sakan'ny kodiarana misy kodiarana dia ahitsy mifanaraka amin'ny savaivon'ny satrony.
Raha ny mahazatra ny elanelana misy eo amin'ny kodiarana roa dia 2-3mm ambany noho ny savaivon'ny satrony. Ny mpandraharaha dia afaka manitsy ny sakan'ny kodiarana mihodina amin'ny kodiarana B. (ny kodiarana tsirairay dia afaka manamboatra kodiarana mihodina).
Azafady azafady ny visy mitaingina alohan'ny hanamboarana ny kodiarana B.
4. Manitsy ny rafitra fanamboarana tavoahangy.
Ny fanamboarana ny tavoahangy tavoahangy dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny toeran'ny firafitry ny rafitra sy ny axis. Raha ambany loatra amin'ny tavoahangy ny toerana fanamboarana dia mora apetraka mandritra ny fahan-kanina na sakanana ny tavoahangy. Mifanohitra amin'izany kosa raha ambony loatra amin'ny tavoahangy ny toerana fanamboarana, dia hanelingelina ny fiasan'ny kodiarana mihodina io. Hamarino tsara fa ny tsipika afovoan'ny mpampita sy ny fanamboarana tavoahangy dia mitovy amin'ny tsipika aorian'ny fanitsiana.
Kodiarana familiana fihodinana A (hampiodina ny tanany amin'ny tanana 2 miaraka) hanamboatra ny elanelana misy eo amin'ny fehikibo fanamboarana tavoahangy. Ka ny rafitra dia afaka manamboatra tsara ny tavoahangy mandritra ny dingan'ny fanerena.
Ny haavon'ny fehikibo fanamboarana tavoahangy dia matetika no ampifanarahan'ny ascenseur masinina.
(Mitandrema: ny mpandraharaha dia afaka manitsy ny haavon'ny fehikibo fanamboarana tavoahangy ao anaty micro-range aorian'ny famoahana ny visy miakatra amin'ny vatan'ny rohy 4.)
Raha mila mihetsika ny fehikibo amina elanelana be ny mpandraharaha dia mba ampifanaraho azafady ny toeran'ny fehikibo aorian'ny loosen'ny visy 1 sy ny visy 2, ary raha mila manitsy ny haavon'ny fehikibo ireo mpandraharaha ao anaty elanelana kely dia azafady vidy 1 fotsiny ary ahodino ny bokotra fanitsiana .
5. Manitsy ny habaka tavoahangy manitsy kodiarana sy ny arofanina.
Ny mpandraharaha dia tokony hanova ny toeran'ny toeran'ny tavoahangy tavoahangy sy kodiarana rehefa manolo ny famaritana ny tavoahangy. Ny habaka eo anelanelan'ny habaka fanitsiana habaka sy ny lalamby dia tokony 2-3mm kely kokoa avy eo ny savaivon'ny tavoahangy. Azafady mba alao antoka fa ny afovoan'ny conveyor sy ny rafitra fanamboarana tavoahangy dia mitovy amin'ny tsipika aorian'ny fanitsiana.
Loosen fanitsiana loosen afaka manitsy ny toeran'ny kodiarana manamboatra kodiarana.
Loose fanitsiana malalaka dia afaka manitsy ny sakan'ny lalamby amin'ny lafiny roa amin'ny conveyor.
Teo aloha: Masinina mameno vovoka
Masinina mameno vovoka mandeha ho azy miaraka amin'ny Capping